FDA yakatenderwa Machine Fekitori | China FDA yakatenderwa Machine Vagadziri uye Vatengesi
maronda uye zvirwere zvevascular pamwe nekubviswa kwebvudzi uye kugadziridzwa kweganda, kubviswa kweacne zvichingodaro, zvinogamuchirwa neDFA neEC.
SHR IPL Therapy System inotevera inosarudza photothermolysis musimboti. Humwe wavelength iyo inogona kushandiswa mukati nekudyiwa neakananga matishu. Maturu akanangwa anozoparadzwa zvinoenderana nekwakanongedzwa kwechromophore yekusarudza kuyedza. Uyezve, hupamhi hwekupomba huchave hudiki pane kana kuenzana netishu yakanangana nenguva yekuzorora, ipapo kukuvara kwadzo kumatunhu akapoteredzwa kuchadzikiswa nekuda kwekusakwana kwenguva yekutakurisa kupisa.
FDA yakabvumidza Plamere Plasma fibroblast plasma kusimudza kurapwa
FDA yakabvumidza Q Inoshandurwa Nd YAG Laser yekubvisa tattoo
Kurapa musimboti weMonaliza-2 Q-Switched Nd: YAG Laser Therapy Systems yakavakirwa pane laser inosarudza photothermy uye blasting mashandiro eQ-switch laser. Energy fomu yakatarwa wavelength ine chaiyo dhizaini ichaita pane mamwe akanangwa mavara radicals: inki, kabhoni tambo kubva kune derma uye epidermis, exogenous pigment particles uye endogenous melanophore kubva ku derma uye epidermis. Kana ikangoerekana yatsva, Pigment zvidimbu zvinobva zvaputika kuita zvidimbu zvidiki, izvo zvinomedzwa ne macrophage phagocytosis uye inopinda mune lymph kutenderera system uye pakupedzisira kuburitswa kunze kwemuviri.
FDA yakatenderwa LED Yemeso ganda Therapy mwenje
FDA yakatenderwa Fractional CO2 laser
CO2 fractional laser therapy dzidziso yakatanga kuburitswa neUnited States Harvard University nyanzvi yemishonga laser Dr. Rox Anderson, Uye nekukurumidza itai kuti nyanzvi kutenderera pasirese vabvumirane uye kurapwa kurapwa. CO2 fractional laser wavelength ndeye 10600nm, iko kushandiswa kwekusarudza kwemhepo kuora musimboti, zvakaenzana paganda rakaratidzirwa nemakomba akanaka, zvichikonzera iro ganda reganda rekubvisa kupisa, kupisa kwemagetsi, kupisa. Uyezve wozokonzeresa akateedzana eganda biochemical reaction kuti ikurudzire ganda rekuzvigadzirisa, kuitira kuti uwane kusimudzira, kumutsidzira uye kubvisa zvinoitika zvemavara.
FDA yakatenderwa diode laser kurwadziwa isina bvudzi kubvisa mudziyo
Inoshandisa yakakosha laser nehurefu Pulse-Hupamhi 808nm, inogona kupinda mukati mebvudzi follicle .Ichishandisa inosarudza mwenje yekudyara dzidziso, laser inogona kuve inosarudzwa inosanganiswa neiyo melanin yebvudzi uyezve kudziisa iyo shaft shaft uye bvudzi follicle, uyezve kuparadza bvudzi follicle. uye oksijeni sangano rakatenderedza bvudzi follicle. Kana laser zvabuda, sisitimu ine yakakosha kutonhora tekinoroji, inotonhorera ganda uye chengetedza ganda kubva mukukuvadzwa uye kusvika kune yakachengeteka kwazvo uye yakasununguka kurapwa.